Goadelopa : “Nibolisatra” Ny Polisy ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2018 2:13 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Português, Español, Nederlands, English
Tao anatin'ny fifanjevoana sosialy manjo an'i Goadelopa efa ho iray volana, nisy alina roa feno herisetra ny 17 sy 18 Febroary 2009.. Ankoatra ireo fandoroana niniana natao taminà magazay sy ireo afo fanakanan-dàlana maro, tafakatra avo ireny fifandonana feno herisetra ireny taorian'ny famonoana tsy mbola nahitàna izay tena marina nahazo ny lehilahy iray. Tantarain'i Trikess, izay manoratra bilaogy ao amin'ny Chien créole, ny fahafatesan'i Jacques Bino, mpitarika sendika goadelopeàna iray, nisy namono tamin'ny alin'ny Talata 24 Feb 2009.
Nanomboka teo, marobe ireo petrakevitra naroso ho fanazavàna, na niezahana hamahàna ity raharaha ity. Namoaka taratasy misokatra momba io raharaha io ilay goadelopeàna bilaogera Indiscrétions :
In-droa nahita ny mangidy i Jacques BINO. Efa nizaka ireny tsy fandehanan-javatra ireny koa izy taloha. Soa ihany fa nisy koa ny polisy naratra tao anatin'ity raharaha ity. Soa ihany fa tsy afaka akory ny ho ahiahiana ry zareo….afa-tsy hoe angamba tsy famonjena olona tra-doza.
Azo heverina ho valinteny ho an'ìireo fanambaràna ofisialy nataon'ny Praiminisitra frantsay io, sy ireo solontenam-panjakàna, izay nanamafy tao amin'ny fahitalavitra hoe maty novonoin'ireo tanora mpikorontana i J. Bino, tanora izay nanao fanakanan-dàlana. (Tsy mbola tonga aminà tatitra ofisialy ny fanadihadiana). Ity ny hevitr'i ChienCréole ny ampitson'ilay famonoana :
Jereo, raha marina fa hoe niditra tamin'ny fanaovana herisetra an-jambany ny sasany tamin'ireo tanora ka nampididoza ny fiainan'ny hafa, ary raha toa aza azo heverina fa ny iray tamin'izy ireo no nisintona ny fihantsim-basy (gachette) nahafaty an'i Jacques Bino, haingana loatra ny tsoakevitry ny rehetra ary maivana raha tsy misy ny tsoakevitra avy amin'ny fanadihadiana.
Ao anatin'ny toedraharaha misy ny fikorontanana sosialy ankehitriny, toa tian'ny polisy ny hamaha haingana araka izay azony atao ity vono olona ity. Kanefa, raha tokony hampitonitony, dia lasa ilay fanadihadiana indray no loharanon'ny ampahan-tantara iray vaovao mahabe resaka, hoy ny fitantaran'i Trikess azy aloha, ary avy eo nampitaina teny anivon'ny tontolon'ny bilaogy, Twitter sy Facebook. Ao anatin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe Fisamborana tovolahy iray ahiahiana ho namono an'i Jacques Bino, tantaran'ilay bilaogera ilay tranga, no sady nakariny ho ety anaty serasera ireo sarin'ilay tovolahy nosamborin'ny polisy sy ny an'ny renibeny, izay tsy nanànan'ny polisy antra. Hoy izy manazava :
Polisy enina, nirongo fiadiana, no niditra voalohany tao amin'ilay trano kely. Nirohotra avy hatrany tsy nisalasala nankany amin'ny efitrano tao amin'ny havia ary namely tamin-kerisetra an'i Patrice, izay vao avy natsamboatry ny fipoahana sy ny kiakiak'ireo polisy.
Sabotsy 21 Febroary, navotsotra ilay tovolahy rehefa tsy nahitàna na inona na inona tao anatin'ny kapila matevin'ny solosainy, ary nandritra ny herinandro lasa iny, naneho ny ahiahiny ny tontolon'ny bilaogy goadelopeàna (BworldConnection) sy ny tao Martinika (Montray kréyol) manoloana ilay fisamborana izay tsarain-dry zareo ho fisamborana tsy mitombina. Nizara ity vaovao ity ihany koa ireo mpampiasa Twitter sy Facebook, hatramin'ireo sary, niampanga ampahibemaso sahady ity raharaha ity ho “hadisoana goavana / fibolisarana”.